"Aide-moi amin'ny Soso-kevitra Hampiroboroboana ny tsirinaina Varotra" (3)
Posted by: Anie Anokuru Novambra 6, 2013
Tsy misalasala milaza fa misy ny vola no mahatonga ny olona ny fitondran-tena kompà any haywire. Tsirinaina mpivarotra ireo ka tratra ao ny fanirian-bola amin'ny alalan'ny namafy voa ho an'ny vola izay manome ny fiheverana ny amin'ny fitondran-tena fiantraikan'izany ny fironana toy izany mazava tsara toa tsy misy,. Ireo izay efa nisafidy ny raharaham-barotra ny sperms (amin'ny "natiora foana mamenoa", any amin'ny faran'ny ny sainy), tokony handinika ny aretina manaraka ny ara-barotra vatsy ny tsirinaina ho an'ny fanahy mahomby fikarohana:
– Ao amin'ny tontolo iainana toy izany, izay firaiketana ny 'zava-kolontsaina' ireo nanohana be, fotsiny fanomezana ny sperms dia fady, miresaka kely ny fanatitra iray ho an'ny vola ny sperms. Mba hisorohana ny fahatsapana unpalatable-bahoaka, Miahiahy aho mpivarotra foana tsirinaina mijery ny an-tsorony, ankavia sy ny ankavanana, alohan'ny nanatona ny varavaran'ny misy tsirinaina banky.
– Na dia eo aza ny ambony ny fanafenana na ny anarana anjara, dia tsirinaina tsy varotra lafiny hafa ny lehilahy fivarotan-tena? Na dia izay fivarotan-tena no Tagged 'ny tranainy indrindra asa', Manontany tena aho hoe firy manodidina afaka ampahibemaso thump amin'ny tratrany izy ireo noho ny handray anjara ao.
Toy izany koa mbola mitazona ny manaraka:
– In-dalana, inona no mety ho mitovy amin'ny 'diso fividianana' ao barotra, ahoana ny hevitrao mety hitranga raha misy vehivavy opts ho an'ny hatao impregnated amin'ny alalan'ny fomba izany taty aoriana tonga saina fa ny vokatra (ny ankizy) Tsy mampiseho ireo toetra (e.g. tsara tarehiny, athleticism, fahiratan-tsaina, sns) aloha nasandratry ny tsirinaina banky? Tsy tokony hisy na dia hanapaka avy, toy ny fijanonana hantsana fepetra, fa sperms mety tena avy amin'ny dokotera sy ny lehilahy mpiasa. Aiza izany mitranga, no dia mbola hanaiky sy hitia ny zaza tsy misy fepetra?
– Azo antoka fa sperms (indrindra fa ny 'kilasy A' toetra) azo amin'ny endrika ity dia mety hiafara ho niantsoany ny famokarana bebe kokoa ny vehivavy bevohoka isan-karazany, indraindray ampiharina eo amin'ny toerana iray manokana ivelan'ny foibe fandraisana fahavokarana. Izany dia mampahatsiahy ny itsiriany iray ny voan'ny ny zavamaniry iray eo amin'ny Lonaka ny zaridaina maro ampitan-dranomasina. any Nizeria, Fantatro attributing toy ny 'Naija-olona' mahatonga ny sofina henatra.
– Misy fikarohana 'milaza' ny ankizy dia midika izany vokatra amin'ny alalan'ny indraindray no teraka kilema; Azo inoana kokoa ny fidorohana zava-mahadomelina, aretin-tsaina sy ny mpanao heloka bevava izy ireo fitondran-tena, rehefa lasa olon-dehibe
Koa, fanaovana tsirinaina misy amin'ny endrika ity ny olona ho toy fotsiny Asehon'ny fananan'ny, izay azo niraharaha, na dia tsy ilaina intsony; na laboratoara santionany (e.g. voalavo) sy ny toeram-piompiana ombivavy ho milked. Toy izany koa Mampahatsiahy ahy ny iray lavanty na omby tsena, aiza ny zavatra (raha izany dia, olona) dia profiled, vehivavy manao ny safidy, ary bamm! - Ny fifanarahana dia namely. Misy zavatra mahazatra eo mihazakazaka toy izany - mitrandraka rehefa ilaina, ary avy eo dia Arian'ny rehefa tsy misy ilàna azy. Ireo tsirinaina mpivarotra, ny masony amin'ny vola, tsy mahita fa ny fomba fanangonana ny tsirilahy sy mampikororosy fahana ny olona objectifies.
Ahoana ny momba ny resaka consanguinity (i.e. rehefa mifandray amin'ny alalan'ny ra na amin'ny alalan'ny taranaky avy amin'ny iray ihany razana)? Tsy tokony hanadino ny zava-misy fa azo aelin'ny firaisana amin'olom-pady ny alalan 'izany, raha mandinika ny mety ny firaisana ara-nofo ny fifandraisana eo amin'ny mpivady, izay tsy nahy dia vokatra avy amin'ny iray ihany tsirinaina mpamatsy (ray). Afaka ny vehivavy order mpandray, amin'ny fanantenana ny manana izany tsirinaina mpamatsy mihoatra ny indray mandeha (mba hahazoana manana izany niteraka ray), hanatrarana izany faniriana izany foana? Iza no milaza ny mitovy foana mpamatsy ho hita ny toky hoavy bevohoka avy any amin'ny loharano iray ihany?
Mijery izay mahazo ny vokatry ny varotra ity amin'ny tsirilahy, ankizy, tsy tokony tsinontsinona ireo:
– Ho mitsaha-mitombo io fisehoan-javatra eo amin'ny raharaham-barotra fivarotana tsirinaina tsy niniana hiafara amin'ny famoronana ny miaramila ny kamboty amin'ny hoavy? Aiza ny idealy ny mahazatra ray aman-dreny sy ny fiaraha-monina ny soatoavina toy ny toerana ny olona toy ny ray aman-dreny, izay antenaina mba hanome fanohanana ara-toekarena ho an'ny vady aman-janany? Ao an-tsain'ny mpivarotra tsirilahy, I envisage dia ho antony manahirana ny fianakaviana, rehefa ny ranon-kazon'ny noho ny famoronana izany dia afaka manaiky mora vola. Moa ve tsy izany hanozongozona sy mpanao kolikoly ny fiaraha-monina, miaraka mamadika ny hevitra ny ray ambony ambany? Tsy Ara-dalàna ny olombelona dia tokony hikarakara ny zanany. Ny manimba vokatry ny fantatra fironana ny tsy tonga ray amin'ny fiaraha-monina izany dia tena mazava tsara.
– Raha toa ka maro ny olona tsy miraharaha, ahoana ny momba ny hafatra lehibe amin'ny ankizy? Amin'ny maha ankizy, dia notezaina teo ny fahatsiarovan-tena momba ny inona no tokony hihazona ho an'ny lehilahy sy ny rainy. Mazava ho azy fa ireo mpamatsy tsirinaina 'tsy manome Hoot' mikasika ny rehefa, izay, na iza ny zanany teraka?
– Tokony hanadino ny Zon'ny Ankizy? Moa tsy anisan'ny zon'olombelona ny olona ny mahafantatra izay ny na ny reny niteraka azy sy ny Ray dia? Ao amin'ny Nizeriana teny manodidina, Inona no hitranga ara-tsaina mieritreritra ny vokatry ny 'ivelany' tsirinaina fandaharana, raha ny loharanom-fomba, na dia mba nankao an fisiana lasa fantatra taty aoriana eo amin'ny fiainana?
Mijery ny zavatra "Related-javatra hafa" maneho izay tafiditra ao ny appellation firenena ity ny fampiharana ny lalàna manan-danja fahafahana misafidy, ny National Agency for ny Fandrarana ny Fifamoivoizana olona an- & Related hafa javatra (NAPTIP), ara-barotra ao amin'ny sperms dia mazava tsara ara-dalàna ao Nizeria. Raha tsorina,, Nizeriana lalàna amin'ny fivarotana zava-dehibe niketrona na ny fanondranana ny olombelona, vatana faritra, ary koa ny tsiranoka izay avy aminy toy izany. (Mbola hitohy).
Aoka ianao ho voalohany haneho hevitra amin'ny ""Aide-moi amin'ny Soso-kevitra Hampiroboroboana ny tsirinaina Varotra" (3)"